ဥရောပဖို့လမ်းအပေါ်, ဧဒုံ-ပူမြေအောက်စမ်း | Apg29
524 online! | Sidvisningar idag: 14 074 | Igår: 192 970 |
ဥရောပဖို့လမ်းအပေါ်, ဧဒုံ-ပူမြေအောက်စမ်းဂြိုဟ်တုတခုဆိုက်ဘေးရီးယားရှိယခုဖြစ်သည့်ကမ္ဘာမြေရဲ့အတွင်းအမာခံအတွက်မြေအောက်မြစ်သံနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ဥရောပအဘို့အဦးတည်နေကြတယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ကမ္ဘာမြေရဲ့ core နဲ့မြေအောက်အာဏာကိုမြေကြီးတပြင်ရဲ့ core တစ်ခုအတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်အဘို့ကိုတက်စေ၏။ အတိအကျဘာကမ္ဘာမြေရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်မသိရပေမယ့် fixed နီးပါး 6000 ဒီဂရီအပူချိန်ရှိပါတယ်ခံရဖို့ယူဆနေသည်။ ပြင်အစိတ်အပိုင်းအရည်သည်နှင့်သံအများအားဖြင့်ပါဝင်ပါသည်နှင့် ပတ်သက်. 4000 ဒီဂရီခန့်မှန်းခြေအပူချိန်ရှိပါတယ်။ဝေးဆင်းမြေကြီးတပြင်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုအောက်တွင်သိပ္ပံပညာရှင်အရည်သံအထူ, အနီပူစီးတွေ့ပြီ။ အာဏာကို 42 ကျော် Mil ကျယ်ပြန့်သည်နှင့်တစ်နာရီလျှင်ငါးမီတာတစ်ဦးမြန်နှုန်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါသံရိုးစွန်းဒေသကျော်ရွေ့လျားနှင့် ပတ်သက်. သုံးဆပိုမြန်ပုံမှန်အားဖြင့်ကမ္ဘာမြေရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုပြုကြကိစ္စ floating အဖြစ်လှုံ့ဆော်ပေး။သံလိုက်နဲ့ Pol ကှကျအတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကြောင်းအရာတစ်ခုခု, ပြင် core ကိုပတ်ပတ်လည် spins နှင့်ဤလှုပ်ရှားမှုများကမ္ဘာမြေရဲ့သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ Power ကအာကာသကနေအန္တရာယ်ရှိတဲ့ရောင်ခြည်များနှင့်အမှုန်များဆန့်ကျင်ကလူကိုကာကှယျပေးရာကမ္ဘာမြေရဲ့သံလိုက်သော့ချက်သည်အရေးပါမှုရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားရေစီးကြောင်းတစ်သံလိုက်စက်ကွင်းပျောက်ကွယ်သွားစေခြင်းငှါခွင့်ပြုထားတဲ့နှင့်လည်းဝင်ရိုးစွန်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်ထိခိုက်သောအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ, play လိမ့်မည်။ဤရွေ့ကားသံလိုက်ထမ်းဘိုးကိုမြေတပြင်လုံးအပေါင်းတို့နှင့်တကွဝေနေယျများအတွက်အလွန်လေးနက်သောအကျိုးဆက်များရှိသည်နိုင်သည့်ခွဲအကြောင်း 250,000 နှစ်ပေါင်းအတူသောအရပ်တို့ကိုပြောင်းပါ။ ကောက်ချက်သိပ္ပံယခင်ကကမ္ဘာမြေရဲ့သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုဆက်စပ်ဝင်ရိုးစွန်းပြောင်းလဲမှုနှင့်ပြတ်တောက်ဘို့, သတိပေးလိုက်သည်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်လူသားများအတွက်ကပ်ဘေးဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များရှိသည်မယ်လို့ကြောင်းအရာတစ်ခုခု။နေရောင်ကိုမည်သည့်အခါတစ်ဦးအချိန်အဲဒီမှာလာ "မီးနှင့်ပြင်းထန်သောအပူနှင့်အတူယောက်ျားလောငျရသော။ " ကမ္ဘာမြေရဲ့သံလိုက်စက်ကွင်းသွားပြီ, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်လမ်းအတွက်ပျက်စီးကြလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်တစ်ဦးကအချိန်။ တစျဖနျအကြှနျုပျတို့သညျနောကျဆုံးကာလတှငျနထေိုငျကျနော်တို့အချိန်လက္ခဏာကဝိုင်းဖြစ်ကြောင်းနေကြတယ်, ဒီနေ့ရဲ့သတင်းကိုအတည်ပြု။ "နားရှိ" နှင့်ဝိညာဉ်တော်သည်ပရိသတ်တို့အားပြောသောအဘယျသို့နားထောငျသူမည်သူမဆို, သူကိုယ်တော်၏ခြေရာသို့နားထောငျတျောနိုငျသညျ, သည်နှင့်လိမ့်မည် - ဓမ္မရာဇဝင်ဘုရင်နှင့်ရှင်များ ဟူ. မိနျ့တျောမူ၏။ယရှေုသညျမကြာမီလာမယ့်နေပါသည်!source:www.apg29.nu/a/52iwww.apg29.nu/a/17twww.apg29.nu/a/10hမိုက်ကယ် Walfridssonhttp://denytterstatiden.blogspot.se/